က Man Down စနစ် / လုံအလုပ်သမားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဖြေရှင်းနည်း (စင်္ကာပူ) | က Man Down စနစ် / လုံအလုပ်သမားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဖြေရှင်းချက် က Man Down အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဖုန်းများအတွက် - တစ်ဦးဝန်ထမ်းတစ်ဦးမတော်တဆကြုံတွေ့နေကြရသည်ဆိုပါကသင်သည်သတိပေးထားကြောင်းသေချာပါစေ
Whatsapp: စင်္ကာပူ + 65 83334466, ဂျကာတာ + 62 811380221
iHelp2ဗားရှင်း - လူစနစ်နိဂုံး - တစ်ကိုယ်ရေအလုပ်သမား ၀ န်ထမ်းများ၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်
iHelp 2.0 ၀ န်ထမ်း GPS Tracker ကိရိယာ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ၏အခြေအနေကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ပြိုလဲသောအခါ 2.0 ကိုကူညီပါ အခြားသူတစ် ဦး ၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကိုအလိုအလျောက်သတိပေးနိုင်ပြီးအကူအညီကိုချက်ချင်းပေးနိုင်ပါသည်
- အန္တရာယ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ၀ န်ထမ်းများ
သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်မိသားစုဝင်များနှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်ခလုတ်တစ်ချက် နှိပ်၍ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဝတ်ဆင်ရန်လွယ်ကူ / ရိုးရှင်းသောနှင့်လက်တွေ့ကျသည် (အရောင် ၄ ရောင်)
ခြေရာခံသည့်ပလက်ဖောင်းပါ ၀ င်သည့် ၀ က်ဘ်နှင့်စမတ်ဖုန်းလျှောက်လွှာများကိုထောက်ပံ့ပေးပါလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းဖြင့်စက်၏တည်နေရာ (သမိုင်းကြောင်း / real-time) ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
၁။ ကမ္ဘာ့အသေးငယ်ဆုံး 1G (WCDMA) ကိုယ်ပိုင် / ပိုင်ဆိုင်မှု GPS tracker
၂။ Docking Station တစ်ခုသည်အားသွင်း။ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအသုံးပြုရန်အတွက်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသည်
၃။ GPS ဂြိုလ်တုအားဖြင့်အချိန်မှန်ခြေရာခံခြင်း
4 ။ (ယခုရရှိနိုင်မပါ) RF အားဖြင့်ခြေရာခံ
AGPS, TTFF သည်စက္ကန့် ၃၀ အတွင်း (GPRS အတွက် ၁၀ စက္ကန့်ပါ ၀ င်သည်)
၈။ အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် 8 mAh လီသီယမ်ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည်။ အဆင်သင့်အချိန် - ၁၀ ရက်
၉။ ရွေ့လျားမှု၊ ထိတ်လန့်စေသောအချက်ပြမှုနှင့်ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် 9D G-sensor ပါဝင်သည်
11. Two way Voice Communication
12. ဒေတာများကိုသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း - နေရာ ၆၀၀၀၀
13 ။ GPRS မျက်စိကန်းသောဧရိယာ data တွေကိုပြန်လည်အပ်လုဒ်ကို function ကို
၁၄။ Firmware ကိုလေထဲမှာအဆင့်မြှင့်ပါ
15. လက်ရှိအနေအထား၏မြေပုံ link ကိုပြန်ကြားပါ
16. SOS အရေးပေါ်ခလုတ်
17. Geo-zone နှိုးစက်, မြန်နှုန်းနှိုးစက်ကျော်
19. U-blox GPS နည်းပညာ
WCDMA Module: Telit UL865 (900 / 2100MHZ နှင့် 850 / 1900mhz), 3G (WCDMA)
2 တေးဂီတအဖွဲ့များ UMTS / HSPA 900 / 2100 MHz (3G)
* မြောက်အမေရိက variants:
2 တေးဂီတအဖွဲ့များ UMTS / HSPA 850 / 1900 MHz (3G)
ဆက်သွယ်ရေး: GPRS လူတန်းစား 10, SMS စာတို, အသံကျော်ကို TCP / IP ကို ​​embedded
antenna: FPC အင်တင်နာအတွင်းတည်ဆောက်ထား
ဂျီပီအက်စ် chipset ကို: uBlox 0702 (AGPS ပံ့ပိုး)
receiver အကြိမ်ရေ: 1575.42 MHz
အေးစတင်: ခန့် 32S, ပုံမှန် TTFF (95%)
နွေးက start: ခန့် 32S, ပုံမှန် TTFF (95%)
ပူက start: ခန့်: 1S, ပုံမှန် TTFF (95%)
antenna: Built-in ကြွေအင်တင်နာ
Backup ကိုဘက်ထရီ: Rechargeable, 3.7V, 800mAh (Li-Poly)
connectors: မိုက်ခရို USB connector မြား
SIM ကဒ်: မိုက်ခရို SIM ကဒ်
accelerometer: 3G ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာအတွက် Built
Flash ကိုမှတ်ဉာဏ်: 8MB မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ Built
ပုံမှန်လက်ရှိစားသုံးမှု: 40 ~ 60mAh
လက်ရှိစားသုံးမှုအိပ်:5~ 10mAh (ချွတ် GPS)
operating အပူချိန်: -20 ° C + 80 မှဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် + သို့ 85 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စိုထိုင်းဆ: 5% -95% Non-ငွေ့ရည်ဖွဲ့
Mainframe အတွက်အရွယ်အစား: 61mm X ကို 44mm X ကို 16mm
အလေးချိန် (NET): 30g
iHelp Man Down System - တစ်ယောက်တည်းအလုပ်သမားလုံခြုံစိတ်ချရမှုဖြေရှင်းသူဖောက်သည်စာရင်း
38775 စုစုပေါင်း Views စာ 136 Views စာယနေ့တွင်
တစ် ဦး တည်းသောအလုပ်သမားဘေးကင်းလုံခြုံမှု - အလေးအနက်ထားရန်အချိန်
အထီးကျန်သောအလုပ်သမားသည် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအနီးကပ်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်မှုမပါဘဲအခြားအလုပ်သမားများနှင့်သီးခြားစီလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်သော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ထို ၀ န်ထမ်းများသည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှအကူအညီမပေးနိုင်သောကြောင့်စွန့်စားမှုခံရနိုင်သည်။ တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းသည်သဘာဝအားဖြင့်လူတစ် ဦး ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သာအားကိုးနိုင်သည့်နေရာများနှင့်နေရာများတွင်နေရာချသည်။ မတော်တဆမှုများသို့မဟုတ်မတော်တဆမှုများ၌သင်ကိုယ်တိုင်ရှိနေပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်များသောအားဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသည်။
ကတီထွင်မူပိုင် 2011, လုလင်ပျို Solutions Pte Ltd	လုလင်ပျို Solutions Pte Ltd